Udingeka nini ummeli? - Law & More B.V.
Udingeka nini ummeli?
Uthole amasamanisi futhi kufanele ngokushesha uvele phambi kwejaji elizokhipha isinqumo ngecala lakho noma ungafuna ukuqala inqubo ngokwakho. Ukuqasha ummeli ukuthi akusize engxabanweni yakho yezomthetho kungukukhetha nini futhi nini ukuqasha ummeli? Impendulo yalo mbuzo incike ohlotsheni lwengxabano obhekene nayo.
Uma kukhulunywa ngamacala obugebengu, ukubandakanyeka kommeli akukaze kube yisibopho. Ezimweni zobugebengu, iqembu eliphikisayo alisona isakhamuzi esikanye noma inhlangano kodwa uPhiko lwezokuShushiswa koMphakathi. Lo mgwamanda uqinisekisa ukuthi amacala obugebengu ayatholakala futhi ashushiswe futhi asebenzisana kakhulu namaphoyisa. Uma umuntu ethola amasamanisi oPhikweni Lwezokushushiswa Komphakathi, uthathwa njengomsolwa kanti umshushisi womphakathi uthathe isinqumo sokumshushisa ngokwenza icala lobugebengu.
Yize kungaphoqelekile ukubandakanya ummeli ezinkantolo zobugebengu, kunconywa kakhulu ukuthi wenze njalo. Ngaphezu kokuthi abameli bakhethekile futhi bangakwazi ukumela izintshisekelo zakho, amaphutha (asemthethweni) kwesinye isikhathi enziwa ngesikhathi sesigaba sokuphenya, ngokwesibonelo, ngamaphoyisa. Ukubona lawa, avame ukugcwala ngokomthetho, amaphutha adinga ulwazi lobuchwepheshe ummeli analo futhi kwezinye izimo angaholela empumelelweni enkulu esinqumweni sokugcina, njengokulahlwa kwecala. Ummeli futhi angaba khona ngesikhathi sokuphenywa kwakho (kanye nokuphenywa kofakazi) futhi ngaleyo ndlela aqinisekise amalungelo akho.
Ukubandakanyeka kommeli nakho akuphoqelekile ekuqhutshweni kwezinhlangano zikahulumeni noma lapho ufaka isikhalazo kwiCentral Appeals Tribunal noma ku-Administrative Jurisdiction Division yoMkhandlu Wezwe. Njengesakhamuzi noma inhlangano umelana nohulumeni, njenge-IND, iziphathimandla zentela, umasipala, njll ezindabeni eziphathelene nesibonelelo sakho, inzuzo kanye nemvume yokuhlala.
Ukuqasha ummeli kodwa kuyisinqumo esihlakaniphile. Ummeli angalinganisa kahle amathuba akho okuphumelela lapho efaka ukuphikisa noma eqala inqubo futhi uyazi ukuthi yiziphi izimpikiswano okufanele zithunyelwe. Ummeli futhi uyazi ngezidingo ezisemthethweni kanye nemikhawulo yesikhathi esebenza emthethweni wokuphatha ngakho-ke angakwazi ukuphatha inqubo yokuphatha kahle.
Icala lomphakathi lifaka ukungqubuzana phakathi kwabantu abazimele kanye / noma izinhlangano zabazimele. Impendulo yombuzo wokuthi ngabe usizo lommeli luyimpoqo yini iyinkimbinkimbi ngokwengeziwe emacaleni omphakathi.
Uma inqubo ilindile ngaphambi kwenkantolo yesifunda esincane, ukuba nommeli akusona isibopho. Inkantolo yesifunda inegunya emacaleni anesimangalo (esilinganisiwe) esingaphansi kwama- € 25,000 nawo wonke amacala okuqashwa, amacala okuqasha, amacala obugebengu amancane nezingxabano mayelana nesikweletu sabathengi nokuthengwa kwabathengi. Kuwo wonke amanye amacala, inqubo isenkantolo noma enkantolo yokudlulisa amacala, okwenza kuphoqeleke ukuba nommeli.
Ngaphansi kwezimo ezithile, kungenzeka emacaleni omphakathi ukucela inkantolo ukuthi ithathe isinqumo esisheshayo (sesikhashana) kwinqubo ephuthumayo. Inqubo yezimo eziphuthumayo yaziwa nangokuthi inqubo yokufingqa. Umuntu angacabanga, ngokwesibonelo, inqubo efingqiwe ye-'Viruswaarheid 'mayelana nokuqedwa kwesikhathi sokubekwa ekhaya.
Uma uqala ngokufingqa izinkantolo ngokwakho enkantolo yomphakathi, kuphoqelekile ukuba nommeli. Lokhu akunjalo uma inqubo ingaqalwa enkantolo yesifunda esincane noma uma uzivikela ngokufingqa amacala obekwe wona.
Yize ukubandakanya ummeli kungaphoqelekile ngaso sonke isikhathi, kuvame ukwelulekwa. Abameli bavame ukwazi konke ukungena nokuphuma kwalomsebenzi nokuthi bangaletha kanjani kahle icala lakho esiphethweni esiyimpumelelo. Kodwa-ke, ukubandakanya ummeli akusizi kuphela uma kufanele noma ufuna ukuya enkantolo. Cabanga, isibonelo, ngesaziso sokuphikisana ne-ejensi kahulumeni noma inhlawulo, isaziso sokwehluleka ukusebenza ngenxa yokungasebenzi noma ukuzivikela lapho usengozini yokuxoshwa. Ngokunikwa ulwazi namakhono akhe asemthethweni, ukubandakanya ummeli kukunikeza ithuba elihle lokuphumelela.
Ngabe ucabanga ukuthi udinga izeluleko zochwepheshe noma usizo lwezomthetho kummeli okhethekile ngemuva kokufunda lo mbhalo? Sicela ungangabazi ukuxhumana nabo Law & More. Law & MoreAbameli bangongoti kulezi zindawo zomthetho ezibalulwe ngenhla futhi bayakujabulela ukukusiza ngocingo noma nge-imeyili.
Previous «Wenzani ummeli?